पहिलो पटक अस्ट्रेलियाबाट बोयर जातका बाख्रा ल्याएर नेपालमै बाख्रापालन सुरु, यो जातको बाख्राको बिशेषता यस्तो छ ! – पुरा पढ्नुहोस्……
पहिलो पटक अस्ट्रेलियाबाट बोयर जातका बाख्रा ल्याएर नेपालमै बाख्रापालन सुरु, यो जातको बाख्राको बिशेषता यस्तो छ !
प्रकाश पन्त, बीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशमै पहिलो पटक व्यवसायिक रुपमा बोयर जातका बाख्रा पालन सुरु गरिएको छ । मासुका लागि उपयुक्त मानिएको, छिटो हुर्कने र तौल बढी हुने भएकाले किसानहरु बोयर जातको बाख्रा पालनले यसप्रति आकर्षित भएका छन । सुर्खेतको लेखबेशी नगरपालिका ८ सालडाँडामा समृद्धि कृषिले आधुनिक खोरमा बोयर जातको बाख्रापालन सुरु गरेको हो ।
उच्च मुल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाको सहयोगमा अस्ट्रेलियाबाट ल्याएर बोयर जातका बाख्रा पालन सुरु गरेको फर्मका संचालक तर्कबहादुर शाहीले बताउनुभयो । आयोजनाको सहयोगमा अस्ट्रेलियाबाट बोयर जातका १० वटा पाठी र २ वटा बोका ल्याएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बोयर बाख्रालाई २५ लाख रुपैया परेको थियो । आयोजनाले १४ लाख ४३ हजार रुपैया सहयोग गरेको थियो । वाकी रकम शाही आफैले खर्च गर्नु भएको थियो । आयोजनाले बोयर किन्न आर्थिक र आधुनिक खोर निर्माण गर्न प्राविधिक सहयोग गरेको थियो । छिटो बढ्ने, तौल राम्रो हुने र विश्व बजारमा मासुको माग पनि बढ्दो भएकोले बोयर जातको बाख्राको भविस्य राम्रो देखेर व्यवसायिक रुपमा पाल्न थालको शाहीले बताउनु भयो । सुर्खेतमा यसअघि खाद्य सुरक्षा आयोजनाले १६ वटा शुद्ध बोयर जातका बोकाहरु किसानलाई दिएको थियो ।
त्यसको प्रभाव राम्रो भएकोले किसानको मागलाई निरन्तरता दिन आयोजनाले बोयर बाख्राको स्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सहयोग गरेको आयोजनाका पशु सेवा विज्ञ दामोदर न्यौपानेले बताउनु भयो । उहाँले विदेशबाट बोयर जातका बाख्रा र बोकाहरु ल्याउन धेरै झन्झटिलो हुने, खर्च पनि बढी लाग्ने भएकोले किसानको सहजताको लागि आयोजनाले सहयोग गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
एक वर्ष अघि बाट संचालन गरिएको बाख्रा फर्ममा गत मंसिर महिनामा बोयर जातका बाख्रा र वोकाहरु ल्याइएको थियो । अवको दुई महिना भित्रै वोयरका पाठापाठीहरु विक्री गर्न सुरु गर्ने पनि संचालक शाहीले उल्लेख गर्नुभयो । होटेल व्यवसायी समेत रहेका उहााले बाख्राफर्ममा अहिलेसम्म ७५ लाख रुपैया खर्च भैइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बोयरका पाठापाठी प्रतिकिलो ३ हजार रुपैयाँसम्म बेच्ने योजना बनाएको पनि बताउनुभयो । नेपाल समाचार पत्रमा खबर छ ।
Prevमुख्यमन्त्री भट्टले अस्पताल पुगेर राधालाई भेटे…
Nextकेपी ओलीको यस्तो एक्सन, रमिते मेयर पदमुक्त गर्दै ओलि हेर्नुहोस भिडियो
रबि भगवान हुन भन्दै अन्तरवार्तामै रोएका दिलनिशानी मगर….. एकपटक सबैले हेर्नुपर्ने यो अन्तरवार्ता
हेर्नुहोस्… प्रदीप र जशिता अभिनित नयाँ नेपाली फिल्म ‘लभ स्टेशन’ भिडियो सहित
OMG…उर्लाबारीमा अजिंङ्गरले मृग निलेपछि हेर्नेको घुईचो हेर्नूहोस (भिडियो सहित)
नेपालकै होची भाइरल मुना मगर र बिशाल रायमाझी मिडियामा ! दोहोरीमै गरे यति रमाईलो (भिडियो सहित)
मोटरसाइकलले साइकललाई ठ,क्कर दिदा दुईको मृ,त्यु
चर्चित पत्रकार रबि लामिछाने यस्तो रह्यो यस्पालीको दशै टीका (तस्विरहरूमा हेर्नुहोस्)